एक दशकपछि हङकङमा क्रिकेट खेल्दै नेपाल, जिते के हुन्छ, हारे के? :: PahiloPost
एक दशकपछि हङकङमा क्रिकेट खेल्दै नेपाल, जिते के हुन्छ, हारे के?
काठमाडौं : आइसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) च्याम्पियनसीपमा नेपाल अहिले यस्तो मोडमा आइपुगेको छ कि अब बाँकी चार खेलमा जितको कुनै विकल्प छैन अगाडि बढ्नका लागि।
८ टिम सम्मिलित च्याम्पियनसीपको शीर्ष चारमा अटाउँदै वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा छनोट हुन नेपालले हङकङ र युएई विरुद्ध बाँकी रहेका खेल जित्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य खेलको नतिजा पनि कुर्नुपर्नेछ।
नेपाले छैटौं चरणको दुई खेल हङकङसंँग उसैको मैदानमा खेल्दैछ र पहिलो खेल भोलि शुक्रबार हङकङको मिसन ग्राउण्ड रोडस्थित मोङ कोकमा हुँदैछ।
नेपालको सिनियर टोलीले हङकङमा गएर क्रिकेट खेल्न लागेको यो ११ वर्षयता पहिलो अवसर हो।
नेपालले सन् २००४/५ को एसीसी फास्ट ट्रयाक कन्ट्रिज टुर्नामेन्टमा हङकङ गएर खेलेको थियो। जहाँ नेपाल ३ विकेटले पराजित भएको थियो।
नेपालले पहिलो इनिङ्समा २२८ तथा दोस्रो इनिङ्समा १५१ रन बनाएको थियो पहिलो इनिङ्समा नेपालका लागि शक्ति गौचनले सर्वाधिक ६० रनको योगदान गरेका थिए।
उता हङकङलाई नेपालले पहिलो इनिङ्समा सय रनमै आउट गरेपछि दोस्रो इनिङ्समा २८१ रन बनाएपछि नेपाल हारेको थियो।
११ वर्षमा धेरै कुरा फेरिसकेको छ। हङकङ र नेपालको क्रिकेटमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकको छ। त्यसबेला खेलेकामध्ये पारस खड्का र शरद भेषावकर मात्र अहिलेको नेपाली टोलीमा छन्। शक्ति गौचन स्वास्थ समस्याका कारण टिममा छैनन्। हङकङले पछिल्ला दिनहरुमा क्रिकेटमा सुधार गरिरहेको छ। नेपालमा भने सर्वोच्च संस्या क्यान आइसीसीको निलम्वनमा रहेको छ। तैपनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु खेल्ने मौका भने पाइरहेको छ।
एक दशकपछि हङकङमा क्रिकेट खेल्न लागिरहेको नेपाली टोली बुधवार मात्र हङकङ पुगेको छ। पारस खड्काको कप्तानी रहेको नेपाली टोलीमा दुई नयाँ अनुहारका रुपमा स्पिनर सुशील कँडेल र समर ललित सिंह भण्डारी रहेका छन्। टिममा केही पूरा खेलाडी तथा नयाँ खेलाडीहरुको समिश्रण रहेको छ। हङकङ जानुअघि कप्तान पारसले नयाँ भए पनि नेपाली खेलाडीहरु अनुभवी रहेको बताएका थिए। यस्तै यनले हङकङ विरुद्ध जितको विकल्प पनि नरहेको स्वीकारिसकेका छन्।
हङकङले नेपाल बाहेक इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा अफगानिस्तासंँग पनि खेल्दैछ। त्यसैले उसले अष्ट्रेलियानमा प्रशिक्षण तथा म्याच खेलेको थियो। यता नेपालले भने दशैँको बेला चेन्नाई टुर गर्दै ४ मध्ये ३ खेलमा जितेको थियो भने एक खेल हारेको थियो।
कप्तान पारसले यस पटक नेपालको तयारी राम्रो रहेको बताएका छन्। अब त्यसलाई नेपालले कुन हदसम्म हङकङमा लागु गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। नेपाल र हङकङ दुवैलाई यो खेल उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। दुवै टोली यस्तो अवस्थामा छन् कि यदि दुवै खेल हार्ने हो भने दुवै टोलीका लागि शीर्ष चारमा पर्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ। एक एक खेल जितेमा सम्भावना बाँकी रहन्छ भने दुई खेल जित्ने टोली शीर्ष चारको होडमा एक कमद अगाडि बढ्नेछ।
अहिलेसम्म १० खेले खेलेका हङकङ र नेपाल क्रमश: पाँचौ र छैटौँ स्थानमा छ।
पछिल्लो पटक नेपालले हङकङसंँग मार्च ३० मा एसीसी इमर्जिङ कपमा खेलेको थियो। बंगलादेशमा भएको उक्त खेलमा नेपाल ७ विकेटले विजयी भएको थियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र शरद भेषावकरले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। कप्तान परास खड्काको अनुपस्थितिमा नेपालको कप्तानी गरेका ज्ञानेन्द्रले बलिङमा समेत २ विकेट झारेका थिए।
नेपाले जिते के हुन्छ हारे के हुन्छ?
स्पष्ट छ नेपालले हङकङलाई दुवै खेलमा पराजित गर्न सके नेपाल शीर्ष चारको होडमा कायम रहनेछ। तर दुवै खेलमा हार बेहोर्‍यो भने च्याम्पियनसीपको शीर्ष चार होडबाट मात्र बाहिरिने छैन डिऐजन टू मा समेत झर्नेछ।
नेपालले दुवै खेल जितेमा नेपालको १२ खेलबाट १२ अंक नै हुनेछ र अंक तालिकामा हङकङलाई उछिन्नेछ। त्यसपछि बाँकी रहेको युएई विरुद्धको दुवै खेल जित्ने र स्कटल्याण्डले केन्यालाई अन्तिम चरणमा हराउने हो भने नेपाल शीर्ष चारमा पर्नेछ।
दुवै खेल हारेको खण्डमा भने नेपालको ८ अंक मात्र हुनेछ र युएईलाई दुवै खेलमा हराएपछि शीर्ष चारमा पर्न त्यो अंक पर्याप्त हुनेछैन र नामिविया र युएईसंँग डिभिजन टू मा झर्नेछ।
यस्तै १-१ खेल जितेमा भने नेपालको केही सम्भावना बाँकी रहन्छ। हङकङसंँग १-१ भए हङकङ १३ अंक जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लनेछ भने नेपाल १० अंकका साथ यथास्थानमा रहनेछ। यस्तो अवस्थामा शीर्ष चारमा पर्न नेपालले बाँकी दुई खेलमा युएईलाई हराउनुपर्नेछ नै केन्या स्कटल्याडसंँग हार्नुपर्नेछ भने हङकङ पनि पपुवा न्युगिनीसंँग पराजित हुनुपर्नेछ। नत्र नेपाल शीर्ष चारमा पर्न असफल हुनेछ।
नेपाल डिभिजन टू मा झरे के हुन्छ?
अहिले च्याम्पियनसीपमा रहेका ८ मध्ये अन्तिम चारमा रहने डिभिजन टू मा झर्नेछ। तर वान डे क्वालिफायर खेल्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहन्छ। अहिले डिभिजन टू मा ओमान र क्यानडा छन्। च्याम्पियनसीपबाट झर्ने चार र उक्त दुई टीमबीच हुने डिभिजन टू बाट शीर्ष दुई टोली पनि वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायरका लागि छनोट हुनेछ।
च्याम्पियनसीपको शीर्ष चारमा रहने चार टीम डिभिजन टू बाट शीर्ष दुई स्थानमा रहने दुई टीम र आइसीसी वान डे वरियताको ८ देखि १२औँ स्थानमा रहने चार टिम गरी कूल १० टिमबीच सन् २०१९ को वान डे क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुनेछ।
आइसीसीको ८ देखि १२औँ वरियतामा क्रमश: वेष्ट इन्डिज, अफगानिस्तान, जिम्वावे र आयरल्याण्ड छन्।
यसमा शीर्ष हुने दुई टोली मात्र वर्ल्ड कपमा छनोट हुनेछ। अहिले आइसीसीको शीर्ष ८ वरियतामा रहका आयोजक इंग्ल्याण्डसहित भारत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान, न्यूजिल्याण्ड, बंगलादेश र श्रीलंका गरी ८ टिम भने सोझै वर्ल्ड कपका लागि छनोट भइसकेका छन्।
एक दशकपछि हङकङमा क्रिकेट खेल्दै नेपाल, जिते के हुन्छ, हारे के? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।